July 2017 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Android Themes Phone Application Xiaomi
Maung Pauk at 1:07:00 PM 0
Xiaomi အတွက် MIUI9တွေတင်လို့မရသေးခင် မြန်မာစာပါဝင်တဲ့ MIUI9Theme ကိုတင်ပြီး လန်းနိုင်ပါပြီ.. Theme Change ပြီး Reboot Now နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
(ချိန်းမရတဲ့သူတေ Play store ကနေ Miui theme editor downပြီး Browse ကနေ import လုပ်ပြီး start လုပ်လိုက်ပါ theme ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ် အာ့ဆိုချိန်းရပါပြီ)
Xiaomi အတှကျ MIUI9တှတေငျလို့မရသေးခငျ မွနျမာစာပါဝငျတဲ့ MIUI9Theme ကိုတငျပွီး လနျးနိုငျပါပွီ.. Theme Change ပွီး Reboot Now နှိပျပေးလိုကျပါ
(ခြိနျးမရတဲ့သူတေ Play store ကနေ Miui theme editor downပွီး Browse ကနေ import လုပျပွီး start လုပျလိုကျပါ theme ထဲရောကျသှားလိမျ့မယျ အာ့ဆိုခြိနျးရပါပွီ)
Ref : Than Toe Aung
Download MIUI9Theme With MM Font.mtz : 4.62 Mb
Maung Pauk at 12:41:00 PM 0
Microsoft .Net Install လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ Software တွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက် .Net Framework 4.7 ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Download Microsoft .Net Framework 4.7.exe : 48.73 Mb
Computer software Microsoft OS Windows Windows 10
Maung Pauk at 12:08:00 PM 0
Windows 10 မှာ နောက်ဆုံး Update ပေးထားတဲ့ Windows 10 Creators ဖြစ်ပါတယ်.. အဓိကအားဖြင့် 3D စနစ်နဲ့ Game Performance စနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အထောက်အပံ့ပေးထားပါတယ်.. Windows Boot Time နဲ့ Shutdown Time ပိုမိုမြန်ဆန်သွားပါတယ်.. Dell 3521 နဲ့ စမ်းသပ်ချက်အရ 64 bit မှာ Boot Time ဟာ 11 စက္ကန့်သာရှိပြီး Shutdown ဟာ6စက္ကန့်သာကြာပါတယ်... 775 Pentium D CPU, RAM 3Gb နဲ့ဆင်ထားတဲ့ Desktop မှာတင်ထားတဲ့ 32 bit ကတော့ Boot 23 စက္ကန့်ကြာပြီး shutdown က 8 စက္ကန့်သာကြာပါတယ်...
ကျွန်တော်ဒေါင်းပြီး စမ်းပြီးသား Windows 10 Creators iso တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Activate ဖြစ်ဖို့ကတော့အောက်မှာကြည့်ပါ.. အဆင်ပြေပြေနဲ့ Activate လုပ်နိုင်ပါတယ်...
Click to Activate Windows 10
Windows 10 မှာ နောကျဆုံး Update ပေးထားတဲ့ Windows 10 Creators ဖွဈပါတယျ.. အဓိကအားဖွငျ့ 3D စနဈနဲ့ Game Performance စနဈကို ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျအထောကျအပံ့ပေးထားပါတယျ.. Windows Boot Time နဲ့ Shutdown Time ပိုမိုမွနျဆနျသှားပါတယျ.. Dell 3521 နဲ့ စမျးသပျခကျြအရ 64 bit မှာ Boot Time ဟာ 11 စက်ကနျ့သာရှိပွီး Shutdown ဟာ6စက်ကနျ့သာကွာပါတယျ... 775 Pentium D CPU, RAM 3Gb နဲ့ဆငျထားတဲ့ Desktop မှာတငျထားတဲ့ 32 bit ကတော့ Boot 23 စက်ကနျ့ကွာပွီး shutdown က 8 စက်ကနျ့သာကွာပါတယျ...
ကြှနျတျောဒေါငျးပွီး စမျးပွီးသား Windows 10 Creators iso တှကေို တငျပေးလိုကျပါတယျ..
Activate ဖွဈဖို့ကတော့အောကျမှာကွညျ့ပါ.. အဆငျပွပွေနေဲ့ Activate လုပျနိုငျပါတယျ...
What's New in Windows 10 Creator : https://blogs.windows.com
Download Windows 10 Creators iso 32bit(x86) : 2.64 Gb
Download Windows 10 Creators iso 64bit(x64): 3.39 Gb
Maung Pauk at 10:52:00 PM 0
၈။ဆူးပန်းခွေ သွယ်ဘယက်နှင့် ပေရွက်လိပ် နားတောင်းဆင်
( 1 .2MB ) စာမျက်နှာ - ၂၈၀
#Credit to - Burmeseclassic
Android Tool Xiaomi
Maung Pauk at 10:42:00 PM 0
Xiaomi Devices တွေကို Online မလိုပဲ Fastboot ကနေတစ်ဆင့် Bootloader Unlock One Click ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
Beta မို့ Model6မျိုးပဲရအုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. BL Unlock လုပ်တာကလည်း 2sec ထက်မပိုစေရပါဘူးဗျာ ;) .. အဲ့လောက်ကိုမြန်တာ
ပထမဦးဆုံးဖုန်းကို Fastboot ကနေထားကနေကြိုးချိတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ
ပီးရင် Tool ကိုဖွင့်ပါ Support Model List ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ ကိုယ့် Model လေးရွှေးပီး Bootloader Unlock ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျာ
Reboot ကျပီး Fastboot ကိုပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ဒါဆို Bootloader Unlock အောင်မြင်ပါပီခင်ဗျာ..
Bootlaoder Unlock လုပ်ပီး Account ဖြုတ်ခင်သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် အကောင့် ဖြုတ်တဲ့ Function လေးထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
Beta ဖြစ်တာကြောင့် Account Remove ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ Error တစ်ချို့ရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ (အဲ့အတွက်ကတော့ Make your owm risk ပါ)
Xiaomi Devices တှကေို Online မလိုပဲ Fastboot ကနတေဈဆငျ့ Bootloader Unlock One Click ဖွငျ့ပွုလုပျနိုငျမညျဖွဈပါတယျခငျဗြာ..
Beta မို့ Model6မြိုးပဲရအုနျးမှာဖွဈပါတယျခငျဗြာ.. BL Unlock လုပျတာကလညျး 2sec ထကျမပိုစရေပါဘူးဗြာ ;) .. အဲ့လောကျကိုမွနျတာ
ပထမဦးဆုံးဖုနျးကို Fastboot ကနထေားကနကွေိုးခြိတျလိုကျပါခငျဗြာ
ပီးရငျ Tool ကိုဖှငျ့ပါ Support Model List ဆိုတဲ့နရောလေးမှာ ကိုယျ့ Model လေးရှေးပီး Bootloader Unlock ဆိုတာလေးကိုနှိပျပေးပါခငျဗြာ
Reboot ကပြီး Fastboot ကိုပွနျရောကျသှားပါလိမျ့မယျ ဒါဆို Bootloader Unlock အောငျမွငျပါပီခငျဗြာ..
Bootlaoder Unlock လုပျပီး Account ဖွုတျခငျသူမြားအတှကျလညျး အဆငျပွအေောငျ အကောငျ့ ဖွုတျတဲ့ Function လေးထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျခငျဗြာ
Beta ဖွဈတာကွောငျ့ Account Remove ပွုလုပျတဲ့အခါမှာ Error တဈခြို့ရှိနိုငျပါတယျခငျဗြာ (အဲ့အတှကျကတော့ Make your owm risk ပါ)
Download OMH Mi BL Unlocker Beta.exe: 5.7 Mb
Maung Pauk at 1:28:00 PM 0
Browser မှတစ်ဆင့် အွန် လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်း၊ အွန်လိုင်း ရေဒီယိုနားထောင်ခြင်းနှင့် YouTube ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သော အထင်ကရ plugin တစ်ခုဖြစ်သည့် Flash Playerကို စတင်ထွက်သည့်အချိန်မှ ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုအကြာတွင် အဆုံးသတ် ရန် Adobe က စီစဉ်ခဲ့သည်။
Chrome, Microsoft Edge နှင့် Safari တို့သည် Flash ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်များကတည်းက တားမြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ Flash အတွက် အထောက်အပံ့ကို ၂၀၂၀နှစ်ကုန်တွင် အပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်း ရန် Adobe က စီစဉ်နေသည်။
‘‘Flash Player ဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့ update ပြုလုပ်ခြင်းကို ၂၀၂၀ နှစ် ကုန်ပိုင်းမှာ ရပ်ဆိုင်းသွားပါမယ်။ Content creator တွေအနေနဲ့ လက်ရှိ Flash content တွေကို open format သစ်တွေထံ ပြောင်းလဲဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်’’ဟု Adobe မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဂိမ်း၊ ပညာရေးနှင့် ဗီဒီယိုဆိုက်အများအပြားတွင် Flash ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် Apple, Facebook, Google, Microsoft နှင့် Mozilla တို့ကဲ့သို့ ကုမ္ပဏီများနှင့် လက်တွဲ ပြီး ၂၀၂၀ မတိုင်မီအထိ အဆိုပါ နည်းပညာကို ထောက်ပံ့မည်ဟု Adobe က ပြောကြားသည်။
Microsoft သည် ၂၀၁၉ ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွင်း Edge နှင့် Internet Explorer တွင် default အနေနှင့် Flash ကို disable လုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ ၂၀၁၉ တွင်Windows ဗားရှင်းအားလုံးမှ Flash အထောက်အပံ့ကို အပြီးတိုင်ဖယ်ရှားဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
Google ကလည်း Flash ကို လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အထိ disable ဆက်လုပ်ထားပြီး ၂၀၂၀ တွင် အပြီးတိုင်ဖယ်ရှားမည်ဟု ပြောကြားသည်။
Firefox သုံးစွဲသူများအနေ ဖြင့် နောက်လအထိ Flash အသုံးပြုနိုင်မည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များရွေး ချယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Mozillaက ပြောကြားသည်။ ထို့အပြင် Firefox Extended SupportRelease (ESR) သုံးစွဲသူများအနေ ဖြင့် ၂၀၂၀ နှစ်မကုန်မီအထိ Flash ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ Apple အနေဖြင့်လည်း Flash အတွက် အထောက်အပံ့ကို ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်အထိ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဟု ဆိုသည်။
Flash ကို အဆုံးသတ်မည့်အတွက်ကြောင့် လုံခြုံရေးပိုင်းတွင် သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး Laptop များ နှင့် အခြားမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ ဘက်ထရီသက်တမ်း ပိုကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
Browser မှတဈဆငျ့ အှနျ လိုငျးဂိမျးကစားခွငျး၊ အှနျလိုငျး ရဒေီယိုနားထောငျခွငျးနှငျ့ YouTube ဗီဒီယိုကွညျ့ရှုခွငျးတို့ကို ပွုလုပျနိုငျသော အထငျကရ plugin တဈခုဖွဈသညျ့ Flash Playerကို စတငျထှကျသညျ့အခြိနျမှ ဆယျစုနှဈနှဈစုအကွာတှငျ အဆုံးသတျ ရနျ Adobe က စီစဉျခဲ့သညျ။
Chrome, Microsoft Edge နှငျ့ Safari တို့သညျ Flash ကို လှနျခဲ့သော နှဈမြားကတညျးက တားမွဈခဲ့သညျ။ ယခုအခါ Flash အတှကျ အထောကျအပံ့ကို ၂၀၂၀နှဈကုနျတှငျ အပွီးတိုငျရပျဆိုငျး ရနျ Adobe က စီစဉျနသေညျ။
‘‘Flash Player ဖွနျ့ဝခွေငျးနဲ့ update ပွုလုပျခွငျးကို ၂၀၂၀ နှဈ ကုနျပိုငျးမှာ ရပျဆိုငျးသှားပါမယျ။ Content creator တှအေနနေဲ့ လကျရှိ Flash content တှကေို open format သဈတှထေံ ပွောငျးလဲဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ’’ဟု Adobe မှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ တဈဦးက ပွောကွားသညျ။
ဂိမျး၊ ပညာရေးနှငျ့ ဗီဒီယိုဆိုကျအမြားအပွားတှငျ Flash ကိုဆကျလကျအသုံးပွုနဆေဲဖွဈသောကွောငျ့ Apple, Facebook, Google, Microsoft နှငျ့ Mozilla တို့ကဲ့သို့ ကုမ်ပဏီမြားနှငျ့ လကျတှဲ ပွီး ၂၀၂၀ မတိုငျမီအထိ အဆိုပါ နညျးပညာကို ထောကျပံ့မညျဟု Adobe က ပွောကွားသညျ။
Microsoft သညျ ၂၀၁၉ ဒုတိယနှဈဝကျအတှငျး Edge နှငျ့ Internet Explorer တှငျ default အနနှေငျ့ Flash ကို disable လုပျရနျ စီစဉျထားသညျ။ ၂၀၁၉ တှငျWindows ဗားရှငျးအားလုံးမှ Flash အထောကျအပံ့ကို အပွီးတိုငျဖယျရှားဖွဈမညျဖွဈသညျ။
Google ကလညျး Flash ကို လာမညျ့နှဈအနညျးငယျအထိ disable ဆကျလုပျထားပွီး ၂၀၂၀ တှငျ အပွီးတိုငျဖယျရှားမညျဟု ပွောကွားသညျ။
Firefox သုံးစှဲသူမြားအနေ ဖွငျ့ နောကျလအထိ Flash အသုံးပွုနိုငျမညျ့ ဝကျဘျဆိုကျမြားရှေး ခယျြနိုငျမညျဖွဈကွောငျး Mozillaက ပွောကွားသညျ။ ထို့အပွငျ Firefox Extended SupportRelease (ESR) သုံးစှဲသူမြားအနေ ဖွငျ့ ၂၀၂၀ နှဈမကုနျမီအထိ Flash ကို ဆကျလကျအသုံးပွုနိုငျ မညျဖွဈသညျ။ Apple အနဖွေငျ့လညျး Flash အတှကျ အထောကျအပံ့ကို ၂၀၂၀ နှဈကုနျအထိ ထောကျပံ့ပေးမညျဟု ဆိုသညျ။
Flash ကို အဆုံးသတျမညျ့အတှကျကွောငျ့ လုံခွုံရေးပိုငျးတှငျ သိသိသာသာ တိုးတကျကောငျးမှနျလာပွီး Laptop မြား နှငျ့ အခွားမိုဘိုငျးထုတျကုနျမြား ဘကျထရီသကျတမျး ပိုကောငျးလာမညျဖွဈသညျ။
Ref : 7Day Daily
Maung Pauk at 10:57:00 PM 0
Spreadtrum တွေရဲ့ FRP တွေကို Unlock လုပ်နိုင်ပါမယ်... Xiaomi တွေရဲ့ Account တွေကို ဖြုတ်နိုင်ပါမယ်.. Fastbood Mode ကနေ ချိတ်ဆက်ပြီး ပေးထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရပါမယ်..
Spreadtrum တှရေဲ့ FRP တှကေို Unlock လုပျနိုငျပါမယျ... Xiaomi တှရေဲ့ Account တှကေို ဖွုတျနိုငျပါမယျ.. Fastbood Mode ကနေ ခြိတျဆကျပွီး ပေးထားတဲ့ ညှနျကွားခကျြအတိုငျး လုပျဆောငျရပါမယျ..
Spreadtrum FRP Unlocker , Xiaomi MI Account Unlocker isasmall application for windows computer , which allows you to remove the Spreadtrum FRP and Xiaomi MI Account . Please read the following terms and conditions carefully before using Spreadtrum FRP Unlocker , Xiaomi MI Account Unlocker. Use of this software indicates you accept the terms of this license agreement and warranty.
You can remove Android Spreadtrum FRP on fastboot mode using the Spreadtrum FRP Unlocker , Xiaomi MI Account Unlocker tool. Remove Android FRP without using any box, use the simple fastboot tool to remove FRP lock on Android smartphones. The Factory Reset Protection remove fastboot tool is very useful fro mobile repair shop on an individual who want to Hard Reset or FRP reset on Android devices. This tool is working on many Android devices to remove FRP or Hard Reset, Some of the model will not support in this FRP remove software or tool, So please follow the below steps one by one according to your phone's model and CPU.
Download Unlocker - FRP/Mi Account Remover.rar : 7.95 Mb
Samsung Schematics Diagram
Maung Pauk at 11:57:00 PM 0
Hardware Service သမားတွေအတွက် All Samsung Schematics Diagram Collection 2017 တွေပါ..
Schematick Samsung GT-B5330
Schematick Samsung GT-C3222
Schematick Samsung GT-i5500B
Schematick Samsung GT-i5800
Schematick Samsung GT-i7500
Schematick Samsung GT-i8000
Schematick Samsung GT-I8150
Schematick Samsung GT-I8160
Schematick Samsung GT-i8190
Schematick Samsung GT-i8320
Schematick Samsung GT-i8330
Schematick Samsung GT-I8530
Schematick Samsung GT-I8552
Schematick Samsung GT-i8700
Schematick Samsung GT-i8910
Schematick Samsung GT-I9000
Schematick Samsung GT-I9000B
Schematick Samsung GT-I9001
Schematick Samsung GT-i9003C
Schematick Samsung GT-i9010
Schematick Samsung GT-I9023
Schematick Samsung GT-i9070
Schematick Samsung GT-I9082
Schematick Samsung GT-I9100G
Schematick Samsung GT-i9100
Schematick Samsung GT-i9103
Schematick Samsung GT-I9105P
Schematick Samsung GT-I9105
Schematick Samsung GT-i9152
Schematick Samsung GT-I9192
Schematick Samsung GT-I9200
Schematick Samsung GT-I9210
Schematick Samsung GT-i9250
Schematick Samsung GT-I9260
Schematick Samsung GT-I9300
Schematick Samsung GT-i9500
Schematick Samsung GT-i9505
Schematick Samsung GT-M8800
Schematick Samsung GT-N5100
Schematick Samsung GT-N5110
Schematick Samsung GT-N7000
Schematick Samsung GT-N7100
Schematick Samsung GT-N7105
Schematick Samsung GT-N8000
Schematick Samsung GT-P1000
Schematick Samsung GT-P1010_GT-P1013
Schematick Samsung GT-P3100
Schematick Samsung GT-P5100
Schematick Samsung GT-P5110
Schematick Samsung GT-P5200
Schematick Samsung GT-P5210
Schematick Samsung GT-P6200
Schematick Samsung GT-P6800
Schematick Samsung GT-P7320
Schematick Samsung GT-P7500
Schematick Samsung GT-S5330
Schematick Samsung GT-S5570
Schematick Samsung GT-S5830
Schematick Samsung GT_I8262
Schematick Samsung i9100G
Schematick Samsung SGH-L700
Schematick Samsung SM-A300H
Schematick Samsung SM-A500H
Schematick Samsung SM-A700H
Schematick Samsung SM-G313H
Schematick Samsung SM-G350
Schematick Samsung SM-G355H
Schematick Samsung SM-G530H
Schematick Samsung SM-G7102
Schematick Samsung SM-G850F
Schematick Samsung SM-G850
Schematick Samsung SM-G900
Schematick Samsung SM-G906S
Schematick Samsung SM-G920F
Schematick Samsung SM-G925F
Schematick Samsung SM-N900A
Schematick Samsung SM-N900
Schematick Samsung SM-N910C N900H N900CQ
Schematick Samsung SM-N915G_N915F_N915FY
Schematick Samsung SM-T111
Schematick Samsung SM-T211
Schematick Samsung SM-T310
Schematick Samsung SM-T311
Credit : Firmware Download
Android Tool Phone Application Xiaomi
Maung Pauk at 10:46:00 PM 0
Yee Shin Mobile က ရေးထားတဲ့ Mi Account Unlock Error Fix Tool ဖြစ်ပါတယ်.. 9008 Mode ကနေ ဝင်ဖြည်ရမှာပါ.. Mi Account Unlock ပြဿနာတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်...
Yee Shin Mobile က ရေးထားတဲ့ Mi Account Unlock Error Fix Tool ဖွဈပါတယျ.. 9008 Mode ကနေ ဝငျဖွညျရမှာပါ.. Mi Account Unlock ပွဿနာတှကေို တဈဖကျတဈလမျးက အထောကျအကူပွုမယျထငျပါတယျ...
Ref : http://easygsmcrack.blogspot.com
Download Mi Account Unlock Error Fix Tool : 5.58 Mb
Mobile Tutorials Xiaomi
XIAOMI REDMI NOTE 4G 2014912 မှာ Wifi နဲ့ Bluetooth မရခဲ့ရင် ပြန်ပြင်နည်း
Maung Pauk at 1:34:00 AM 0
အောက်ကလင့်ကနေ mmcblk0 ဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီးဖြည်ပါ..
Storage ထဲကိုထည့်ပြီး ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာချိတ်..
Adb ကနေ အောက်ကအတိုင်းရိုက်ထည့်...
[အောကျကလငျ့ကနေ mmcblk0 ဖိုငျကို ဒေါငျးပွီးဖွညျပါ..
Storage ထဲကိုထညျ့ပွီး ဖုနျးနဲ့ကှနျပြူတာခြိတျ..
Adb ကနေ အောကျကအတိုငျးရိုကျထညျ့...]
dd if=/storage/sdcard0/mmcblk0p26 of=/dev/block/mmcblk0p26
Ref : gsmhosting
Download mmcblk0p26.zip : 164 Kb
Maung Pauk at 1:19:00 AM 0
Xiaomi Mi5c ကိုသုံးတဲ့သူတွေ 4G ရတဲ့ SIM ရှိနေပေမယ့် ဖုန်းက 4G မရရင် ဒီနည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
[Xiaomi Mi5c ကိုသုံးတဲ့သူတှေ 4G ရတဲ့ SIM ရှိနပေမေယျ့ ဖုနျးက 4G မရရငျ ဒီနညျးလမျးနဲ့ လုပျကွညျ့နိုငျပါတယျ...]
၁။ ဖုန်းခေါ်တဲ့ Dial မှာ *#*#1#*#* ကိုရိုက်ပါ.. Song Assistant Mode ကိုရောက်သွားပါမယ်...
[ဖုနျးချေါတဲ့ Dial မှာ *#*#1#*#* ကိုရိုကျပါ.. Song Assistant Mode ကိုရောကျသှားပါမယျ...]
၂။ Song Assistant Mode ထဲမှာ TEL_Assistant ကိုရွေးပါ..
[Song Assistant Mode ထဲမှာ TEL_Assistant ကိုရှေးပါ..]
၃။ Telephony ကိုထပ်ရွေးပါ
၄။ Production Target ကိုရွေးပြီး China Unicom ကိုရွေးပါ..
[Production Target ကိုရှေးပွီး China Unicom ကိုရှေးပါ..]
၅။ Back နဲ့တစ်ချက် ပြန်ထွက်ပြီး Radio Access ကိုနှိပ်ပါ.. ဘယ်ဘက်က5MODE ကိုရွေးပြီး အောက်က Save ကိုနှိပ်ပါ။
[Back နဲ့တဈခကျြ ပွနျထှကျပွီး Radio Access ကိုနှိပျပါ.. ဘယျဘကျက5MODE ကိုရှေးပွီး အောကျက Save ကိုနှိပျပါ။]
Reboot တက်လာရင် Network မှာ 4G LTE ကို ရွေးပြီးသုံးနိုင်ပါပြီ...
[Reboot တကျလာရငျ Network မှာ 4G LTE ကို ရှေးပွီးသုံးနိုငျပါပွီ...]
Ref : MIUI Forum
Mobile Tutorials Phone Application Xiaomi
Xiaomi China Stable Rom ကနေ Global Stable Rom ချိန်းနည်း
Maung Pauk at 11:42:00 PM 1
Bootloader Unlock လုပ်စရာ မလိုပါ။
Test Point ထောက်စရာ မလိုပါ။
အသုံးပြုလို့ ရမည့် ဖုန်းများကတော့ အောက်ပါဖုန်းများ ဖြစ်ကြပါသည်-
1.Redmi Note 4x 3/32gb SD chip
2.Redmi Note 4x 4/64gb MTK
6.Mi Note 2
9.Redmi 4A တို့ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ Tools ကို ဒီကနေ ဒေါင်းပါ။
1 - Phone ကို Usb Debugging နဲ့ Unknown Sources On ပီး PC နှင့်ချိတ်ပါ XiaomiTool ကို ဖွင့်ပါ OK, I understand နှိပ်ပါ။
2 - Select ကိုနှိပ်ပါ။
3 - Yes ကို နှိပ်ပါ။
4 - အပေါ်ဆုံးက Bootloader Status ကို စစ်ပီးရင် Recover Info ရောက်ရင် Restart ကျပီးအောက်မှာပြထားတဲ့ပုံတိုင်း ရောက်ရင် Power Key နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
5 - အောက်ကပုံလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
6 - ခနစောင့်ပေးပါ အောက်ကပုံထိရောက်အောင်။
7 - အောက်က ပုံကိုတွေ့ရင်။
8 - ပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း နံပါတ်6Show advance options ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
9 - နံပါတ် 11 Official Miui Rom (.zip) ကို Click ပါ အောက်ကပုံပါအတိုင်း Firmware ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ် - တခုသတိထားကမှာက ကိုတင်ချင်တဲ့ Firmware File ကို PC ရဲ့ Local Disk(C:)
ထဲက XiaoMi Folder ထဲက XiaoMiTool ထဲက rom ဆိုတဲ့ Folder ထဲကို ထည့်ပေးထားပါ။
မှတ်ချက်။ ။ မိမိဖုန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ recovery rom တွေကို ဒီလင့်ကနေ ဒေါင်းထားနိုင်ပါသည်။
10 - Firmware ကို ရွေးပီး Open လိုက်ပါ။
11 - Confirm နှိပ်ပေးပါ။
12 - ခနစောင့်ပေးပါ။
13 - ဒီအဆင့်ရောက်ရင် သင့်ဖုန်း Global ROM စချိန်းနေပါပီ။
100% ပြည့်သွားရင်တော့ အိုကေပါပြီခင်ဗျာ။
Post By Chan Myae
Maung Pauk at 12:01:00 AM 1
Huawei တွေ Firmware ရေးပြီးတဲ့အခါ Noti Bar ပျောက်နေရင် Fix လုပ်ပေးမယ့် Tool လေးပါ.. EMMC Info တွေလည်း ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်.. ဖိုင်ဆိုဒ်က2Mb ကျော်ကျော်လေးဆိုပေမယ့် ဖြည်ချလိုက်တဲ့အခါ 850 Mb ရှိပါတယ်.. ဒေါင်းရတာ ဘေသက်သာတာပေါ့.. GSM Crack and Solution ရဲ့ Tool လေးပါ.. Huawei အားလုံးတော့ မရနိုင်ပါဘူး.. Support ပေးတဲ့ Model တွေတော့ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ...
Huawei တှေ Firmware ရေးပွီးတဲ့အခါ Noti Bar ပြောကျနရေငျ Fix လုပျပေးမယျ့ Tool လေးပါ.. EMMC Info တှလေညျး ကွညျ့လို့ရနိုငျပါတယျ.. ဖိုငျဆိုဒျက2Mb ကြျောကြျောလေးဆိုပမေယျ့ ဖွညျခလြိုကျတဲ့အခါ 850 Mb ရှိပါတယျ.. ဒေါငျးရတာ ဘသေကျသာတာပေါ့.. GSM Crack and Solution ရဲ့ Tool လေးပါ.. Huawei အားလုံးတော့ မရနိုငျပါဘူး.. Support ပေးတဲ့ Model တှတေော့ အဆငျပွနေိုငျမှာပါ...
Thanks : Win Myint and Ping Soe
Download Huawei Noti Theme Fixer : 2.25 Mb
Computer software Management Tool
ကွန်ပျူတာ နှင့် တက်ဘလက်သုံး စားသောက်ဆိုင်သုံး ကွန်ပျူတာစနစ် NS_RKTV (Restaurant and KTV Management Software) (Version 3.0) Tablets Support Updated
Maung Pauk at 10:49:00 PM 0
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးနှင့် အ၀စမ်းသုံးကြည့်ပြီး ကြိုက်မှ ၀ယ်ယူနိုင်မည့် Customer First ဖြစ်သည့် Restaurant Software ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ .... ။
ဒါသုံးရင် ဘာတွေအကျိုးဖြစ်စေနိုင်သလဲ ?
(၁) စာရွက်ပိုင်းလေးတွေမှာ လက်ရှိအော်ဒါတွေမှတ်ပြီး ဘေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှ ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့ ပေါင်းရတဲ့ ကိစ္စကို မေ့လိုက်လို့ရမယ် ... ။
(၂) ကိုယ့် Customer က တစ်ခုခုမှာတဲ့အခါ Waiter က မကြားလိုက်လို့ မမှာမိတာလား ... Kitchen ကပဲ မလုပ်တာလား ဘာလား ညာလားတွေ မေ့လိုက်လို့ရမယ့်အပြင် ... ဘယ်သူပေါ့ဆလို့ အော်ဒါအချိန်မှီမပေးနိုင်တာလဲ ဆိုတာပါ သိရမယ် ....။
(၃) ကောင်တာမှာ Stand by ထိုင်ရမယ့် ကိစ္စမရှိသလောက်ဖြစ်သွားလို့ အခြားနေရာတွေမှာ လစ်ဟာမှုကို ပိုဂရုစိုက်နိုင်မယ် ....။
(၄) တနေ့စာ ဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ ပုလင်း ဘယ်နှစ်လုံး ၀င်တယ် ... ပုလင်းဘယ်နှစ်လုံးရောင်းရတယ် ... ဒါတွေလည်းကြည့်လို့ရမယ် ... ။
(၅) ခရီးသွားနေလို့ ဆိုင်မထိုင်ဖြစ်တဲ့အခါ တစ်နေ့စာ စာရင်းချုပ်ကို ဖုန်းကနေ ကြည့်နိုင်မယ် ... ။
(၆) အခွန်ကိစ္စ Auto / Manual တွက်ပေးမယ် Discount ဘာညာလည်း ပါမယ် ... ကိုယ့် Customer က အခြား Table ကို ကူးသွားလည်း ကိစ္စမရှိ .. အခန်းခကို တစ်ခန်း တစ်ဈေးယူလည်း ပြသနာမရှိ ...
စသဖြင့် ၃ နှစ်ကျော် Update အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပြီး Ready သုံးနိုင်မယ့် Updated Software ဖြစ်ပါတယ် ... ။
ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ ကွန်ပျူတာ (၁) လုံးကတော့ လိုအပ်ပါတယ်.. System အမြင့်စား ဈေးကြီးသည့် ကွန်ပျူတာများ (လုံးဝ) မလိုအပ်ပါ.. အသစ်ဆို ၄ သိန်းပတ်လည်လောက်ရှိပါမယ် ...
မိမိဖာသာနှစ်သက်ရာဆိုင်မှာ ၀ယ်လည်းရသလို လိုက်ဝယ်ပေးပါဆိုလည်း လုပ်ပေးပါတယ် ...
ပရင်တာ ကို ၀ယ်တဲ့နေရာမှာလည်း ရေရှည်ထုတ်ရတာ ကိုက်အောင် Slip Printer ကိုမှ Thermal Printer မှင်မထည့်ရတဲ့ ပရင်တာကို ၀ယ်ရပါမယ် .. NIPPON တို့ XPrinter တို့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိပါတယ်.. ၁ သိန်းကျော်ပါ NIPPON ကို Recommand ပေးပါတယ်.. စက္ကူလိပ်က ၁၅၀၀ ကျပ် ပတ်လည်ရှိပါတယ် (မှင်မလိုပါ).. ပရင်တာကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ (၄) လုံးအထိ ချိတ်လို့ရပါတယ်
ကောင်တာအတွက် (၁) လုံး (ဘေရှင်းဖို့ဆိုတော့ မဖြစ်မနေလိုအပ်)
မီးဖိုချောင်အတွက် (၁) လုံး (အော်ဒါကို ပါးစပ်နဲ့ အော်ပေးမယ်ဆိုရင် မ၀ယ်လည်းရ)
ဘားအတွက် (၁) လုံး (ဘားနှင့် ကောင်တာ ဝေးလွန်းသည့်အခြေအနေတွင် သုံးနိုင်သည် ... (မ၀ယ်လည်းရ).. ဆိုင်အပြင်ဖက်နားက အကင်အတွက် (၁) လုံး (မ၀ယ်လည်းရ .. )
ဆိုင်ကအသေးစားပါ တက်ဘလက်အထိ မသုံးချင်ဘူး
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပဲ သုံးလည်းရပါတယ် ...
အော်ဒါတွေကို ကွန်ပျူတာမှာ အစစာလုံးတစ်လုံးရိုက်ပြီး Arrow Keys နဲ့ ရွှေ့ပြီး Enter နှိပ် ရပီ ..
တက်ဘလက် သုံးရင် ဘာပိုထူးမလဲ ?
တက်ဘလက်သုံးရင် ကောင်တာထိုင်တဲ့လူအော်ဒါမမှတ်ရတော့ဘူး ၀ိတ်တာက မီးဖိုချောင်ကို တိုက်ရိုက်အော်ဒါလုပ်သွားမယ်.. မစိုးရိမ်ပါနဲ့ သူတို့ဘာတွေမှာနေလဲ ဆိုတာကို ကောင်တာကနေ ကြည့်လို့ရပါတယ် ... ဘေကိုတော့ ကိုယ့်ဆီမှာပဲ လာရှင်းရမှာပါ ...
လစဉ်ကြေး / နှစ်စဉ်ကြေးတွေ ရော ထပ်ဆောင်းပေးရအုန်းမှာလား ?
တပြားမှ ထပ်ပေးဖို့ မလိုပါ ... သက်တမ်းဘယ်တော့မှမကုန်ပါ ... ။
ကိုယ်တိုင်ဆိုင်မှာ မထိုင်ဘူး မန်နေဂျာနဲ့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်လုံခြုံပါ့မလား ?
Login Security ကိစ္စပါပါတယ်.. Owner ကလွဲပြီး ရောင်းပြီးသားကို ပြန်ဖျက်လို့မရအောင်
ထိန်းချုပ်ပေးထားပါတယ် ... ။
၀ယ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဆားဗစ်ဘယ်လိုပေးမှာလဲ ... ?
စက်ကို ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ချိတ်လိုက်ပါ ...
ဟဲလိုလိုက်ပါ .. စက်ထဲကို ၀င်လာပြီး ပြင်ပေးပါတယ် ...
နယ်ကမို့လို့ ခရီးသွားချိန် ၂ ရက်လောက်စောင့် ...
လမ်းစားရိတ် ၁ သိန်းကျော် အောက်ထစ် ကုန်တာတွေ မေ့ပစ်လိုက်ပါတော့ .. ။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပျက်သွားတယ် ... Windows ပြန်တင်လိုက်ရတယ်.. မီနူးတွေအကုန်အစက ပြန်ထည့်ရမှာလား ?
ရောင်းထားတဲ့စာရင်းတွေ အကုန်အစက ပြန်စရမှာလား ?
Back Up (ဆော့ဖ်ဝဲလ်အပိုတစ်ခု ပွားပေးထားတဲ့ဟာ) ပါဝင်ပါတယ် ...
စိုးရိမ်စရာမရှိပါ ... ။
မေး - ဆော့ဝဲလ်က ဘယ်လောက်လဲ ?
ဖြေ - နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်
၅ သိန်းမှ ၈ သိန်းကြားလောက်ကျသင့်ပါမယ် ... ။
ဈေးဆစ်လို့ရပါတယ် ... ဈေးကွက်ထဲမှာ ဂျင်းတွေများနေလို့ စိတ်ဝင်စားသူလုပ်ငန်းရှင်များကို
ကြည့်ကျက်လုပ်ပေးပါတယ် ... ။
တက်ဘလက်အတွက်က FREE ပါ ... ။
တက်ဘလက်ကို အလုံး (၂၀) လောက်အထိသုံးချင်တာ.. တက်ဘလက် (၁) လုံးကို ဆော့ဝဲဖိုး ဘယ်လောက်ထပ်ယူလဲ ?
FREE ပါ ... :D ။
တက်ဘလက်လဲ သုံးဦးမယ် ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကလည်း အပိုရှိနေလို့တစ်ဆိုင်ထဲမှာ အပေါ်ထပ်တစ်လုံး
အောက်တလုံး Network ချိတ်ပြီး (၂) လုံးသုံးချင်တယ်..
ကွန်ပျူတာ တလုံးစာပဲ ဈေးကို ယူမှာပါ ... ကျန်တာ FREE ...
အရင် Version ၀ယ်ပြီးသား သူတွေအတွက်ကရော ဘာလုပ်ပေးမလဲ ?
ယခင် ၀ယ်ထားသူများ ယခု Update ကို ယူမယ်ဆိုပါက
100% အပြည့်ပြန်နှုတ်ပေးပါမယ် ... ။
ကျွန်တော်က Install တွေ ဘာတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်.. (သို့မဟုတ်) ကျွန်တော် Reseller အနေနဲ့ ကျွန်တော့် မြို့တွေမှာ ရောင်းချင်ပါတယ်
ခရီးစားရိတ်နဲ့ Installation ခကို ခံစားခွင့်ပေးပါမယ် ..
Customer ဆီကနေ ငွေပိုယူလိုက်မယ့်စနစ်မျိုး (လုံးဝ လုံးဝ) မဟုတ်ပဲ ဒီငွေနဲ့ အမြန်ဆုံး ရယူနိုင်စေဖို့အတွက်ပါ ...
ကျန်တာကို ဆွေးနွေးလိုပါက ဖုန်းဆက်ပေးပါခင်ဗျာ ... ။
ဆော့ဖ်ဝဲလ် နမူနာ စမ်းသုံးမည့်သူများအတွက် အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်
Download NS KTV&RES : 14.3 Mb
(မှတ်ချက် - ယခင် Version 2.0 လင့်ခ်ပဲ ပြန်ညွှန်းပေးထားပါတယ်)
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယခု တက်ဘလက် Version သည် Server ထိုင်ရသည့်အတွက် စက်ထဲ ကိုယ်တိုင် Server ထည့်ဖို့ မလွယ်လို့ မတင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ... ယခင် Version မှာ ယခုဟာနှင့် 80 % ဆင်တူပါတယ်.. အဓိက ပြောင်းလဲမှုမှာ တက်ဘလက်ရသွားခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်းပြောင်းလဲခြင်း
ပရင်တာ ၂ လုံး (ကောင်တာ+မီးဖိုချောင်) မှ ပရင်တာ ၄ လုံးအထိ ထပ်တိုးထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ... ။
ကွန်ပျူတာမရှိသေးလို့ စမ်းမရတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ဆော့ဝဲမှာပါဝင်တဲ့ အရာတွေကို2မိနစ်စာ မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်နိုင်ပါတယ် ...
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
New Stars Myanmar Business Software Development
Ph : 09972884080,09778884080, 0943065913, 09790183228
facebook မှာ Zin Minn Laht လို့ရှာပြီး Chat box မှလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
Maung Pauk at 1:44:00 AM 0
Xiaomi တွေ Account Lock ကျနေတာကို ပြန်ဖြုတ်ဖို့ Mi Account Unlock Tool ဖြစ်ပါတယ်.. Recovery Mode နဲ့ချိတ်ပြီး ဖြုတ်နိုင်ပါတယ်...
Xiaomi တှေ Account Lock ကနြတောကို ပွနျဖွုတျဖို့ Mi Account Unlock Tool ဖွဈပါတယျ.. Recovery Mode နဲ့ခြိတျပွီး ဖွုတျနိုငျပါတယျ...
Thanks to : Mobile Software Advance
Download Mi Account Unlock Tool : 3.42 Mb
Android Tool Computer software
ဖုန်းဆားဗစ်သမားတွေအတွက် Function စုံ Jurassic Universal Android Tool v6
Maung Pauk at 12:45:00 AM 0
Jurassic Universal Android Tool ဟာ Function စုံတာကြောင့် ခေတ်စားနေတဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. ဖုန်းဆားဗစ်သမားတွေအတွက် အသုံးအလွန်တည့်ပြီး ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tool တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်...
Main Function အနေနဲ့-
SERVICE Function အောက်မှာ
Reset Pin/pass/partten (su)
Read partten code /
Read partten code 2
Wipe data Su
Exit Safe mode စတဲ့ အရေးကြီး Function တွေ ပါဝင်ပါတယ်...
Fastboot Function ကနေ လုပ်ဆောင်နိုင်တာကတော့ -
Exit EDL mode တို့ဖြစ်ပြီး
Xiaomi စတဲ့ Model တွေအတွက် FRP ကို Unlock လုပ်နိုင်မှာပါ..
ဒါ့အပြင် အခြား Function မျိုးစုံကိုလည်း ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် ခုပဲ ရယူထားသင့်တဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
Jurassic Universal Android Tool ဟာ Function စုံတာကွောငျ့ ခတျေစားနတေဲ့ Tool တဈခုဖွဈပါတယျ.. ဖုနျးဆားဗဈသမားတှအေတှကျ အသုံးအလှနျတညျ့ပွီး ဆောငျထားသငျ့တဲ့ Tool တဈခုလညျးဖွဈပါတယျ...
Main Function အနနေဲ့-
SERVICE Function အောကျမှာ
Exit Safe mode စတဲ့ အရေးကွီး Function တှေ ပါဝငျပါတယျ...
Fastboot Function ကနေ လုပျဆောငျနိုငျတာကတော့ -
Exit EDL mode တို့ဖွဈပွီး
Xiaomi စတဲ့ Model တှအေတှကျ FRP ကို Unlock လုပျနိုငျမှာပါ..
ဒါ့အပွငျ အခွား Function မြိုးစုံကိုလညျး ထညျ့ပေးထားတဲ့အတှကျ ခုပဲ ရယူထားသငျ့တဲ့ Tool တဈခုဖွဈပါတယျ...
Download Jurassic Universal Android Tool v6 : 52.5 Mb
Maung Pauk at 9:51:00 PM 0
Miracle Box ကိုင်တဲ့သူတွေအတွက် Version သစ်ပါ...
Oppo | Vivo All The Way
1.MTK Add Vivo Read/Write/Format Support.
2.MTK Add Vivo Unlock/Read Pattern/Clear/Anti-Theft.
3.MTK Add Vivo IMEI Repair (World's First).
4.MTK Add OPPO A1601 write Support (World's First).
5.MTK Improve Write Flash.
6.SPD Improve EMMC Format (World's First).
7.SPD Improve FRP Reset (World's First).
8.Qualcomm Improve Read Flash.
9.Qualcomm Improve Lock Bootloader.
10.Android Improve Oppo Network Unlock.
11.Software fix some bugs.
Miracle Box Ver 2.52 Released Update : 331.49 Mb
pCloud Premium Link
Maung Pauk at 11:33:00 AM 0
Smartphone Driver တစ်ခုချင်းကို ဒေါင်းပြီး Install လုပ်ရတာ အချိန်ကြာတယ်လေ.. ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ အလွယ်တကူ Install လုပ်နိုင်မှာပါ..
Window တင်ပီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မှာ့မရှိသေးတဲ့ Driver သွင်းရန်ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်ရင် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ..လိုအပ်ရင်အောက်တွင် Download ရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
File Size - 125MB
Qualcomm Smartphone တွေ Firmware တင်ဖို့ Qualcomm Downloader v1.0.6
Maung Pauk at 11:11:00 AM 0
Qualcomm Smartphone တွေ Firmware တင်ဖို့ Qualcomm_Downloader v1.0.6 ပါ. UI က MTK Flashtool ပုံစံဆိုပေမယ့် Qualcomm တွေအတွက်ပါ.. 9008 Mode ကနေ ချိတ်ပြီး Firmware Folder ကိုရွေးပေးရပါမယ်...
Qualcomm Downloader v1.0.6 : 13.54 Mb
Password = thethtwe
Maung Pauk at 12:36:00 AM 0
SPD,Qualcomm Cpu တွေကို Fastboot ကနေတစ်ဆင့် Frp Lock ဖြုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Tool လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
Develop by : Omh Min Htet
Antivirus ကို Disable လုပ်ထားပါ..
Download OMH Android Reset Tool Ver 1.1 : 2.18 Mb
Maung Pauk at 12:08:00 AM 0
တရုတ်က လေထုညစ်ညမ်းမှုကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် ဂွမ်ဇီပြည်နယ် လီဇူးမှာ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး သစ်တော မြို့တော်ကို တည်ဆောက်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာအ၀န်းမှာ Green Projects များကို ဖန်တီးနေတဲ့ Stefano Boeri Architetti က ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ယခု သစ်တော မြို့တော်မှာ လူပေါင်း ၃၀ ၀၀၀ ခန့် နေထိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်တော မြို့တော်မှာ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အပင်ပေါင်း ၁ သန်းနီးပါးနဲ့ သစ်ပင်ကြီးပေါင်း ၄၀ ၀၀၀ ကို စိုက်ပျိုးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်များဟာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒ် တန် ၁၀ ၀၀၀ ကို စုပ်ယူပေးပြီး အောက်ဆီဂျင် တန် ၉၀၀ ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက် သစ်တော မြို့တော်ဟာ လေထု အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး လေထု အရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အဲဒီ ဒေသမှ ဇီဝမျိုးစိတ်များကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့လည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ လီဇူး သစ်တော မြို့တော်မှာ နေရောင်ခြည်လို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်များကိုသာ အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ စီးပွားရေး ဇုံများ၊ လူနေအိမ်များ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ဆေးရုံတစ်ခုနဲ့ ကျောင်းနှစ်ကျောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော်မှာ အီလက်ထရစ် ရထား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလည်း တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော်ဟာ ၄၃၂ ဧက ( ၁၇၅ ဟက်တာ) ကျယ်ဝန်းမှာ ဖြစ်ပြီး လီဇူး မြောက်ဘက်ရှိ လီဂျီယန် မြစ်နဲ့ ကပ်လျက် တည်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းဟာ တရုတ်ရဲ့ ထိပ်တန်း စီမံကိန်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ရင် တရုတ်နိုင်ငံ အ၀န်းမှာ ဒီလို သစ်တော မြို့တော်များစွာ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပါတယ်။ သစ်တော မြို့တော်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ အပြီးတည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
Credit : Digitaltmies.com.mm
Google ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့မှာ Play Store ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်တွေကို စောင့်ကြည့်သင့်
Maung Pauk at 11:51:00 PM 0
ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် Google ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို သင့်အနေနဲ့ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အကြောင်း ပြောပါရစေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီနေမှာ Play Store ကနေ ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ သင့်အနေနဲ့ လက်လွှတ်လို့မရတာတွေ ရှိနေပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ကြိုက်ပေမယ့် ၀ယ်ကြည့်ဖို့အတွက် အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာလိုပဲ ငှားကြည့် လို့ ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားမှ ၉၉ ဆင့်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်လို့ပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ Play Store မှာ ဇာတ်ကားတွေ အားလုံးကို ငှားပေးသွားမှာပါ။ လောလောဆယ် နောက်ဆုံးထွက်ရုပ်ရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့ Power Ranger တို့လိုတွေအပြင် Gt Out လို ရုပ်ရှင်တွေ အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် google ကနေလည်း တီဗီဇာတ်လမ်းတွေကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဈေးတွေ ချပေးဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ကမ်းခြေကို ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်း စိတ်ပျက်စရာမလိုပါဘူး။ အကောင်းစားသီချင်း တွေကို အခမဲ့ပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေ ရှိနေလို့ပါပဲ။ Google အနေနဲ့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှာ စတင်စာရင်းသွင်းမယ့် ဖောက်သည်အသစ်တွေအတွက် အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ၄ လအထိ အခမဲ့ ရရှိနိုင်လို့ပါပဲ။ ပုံမှန်ဆိုရင် Google Music အတွက် တစ်လကို ဒေါ်လ ၁၀ လောက်အထိ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် Play Store ကနေ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး စာအုပ်တွေအပြင် အခြားနာမည်ကျော် စာအုပ်တွေ အားလုံးကို ဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာနဲ့ ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
ဂိမ်းသမားတွေအတွက်ကတော့ လူသိများတဲ့ ဂိမ်းတွေအားလုံးနီးပါးကို ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ဈေးတွေနဲ့ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ Star War : KOTOR လိုမျိုး ဂိမ်းတွေကို မူရင်းဈေး ၁၀ ဒေါ်လာလောက်ကနေ ၃ ဒေါ်လာလောက်နဲ့ ၀ယ်ယူခွင့် ရရှိနိုင်လို့ပါပဲ။ ထို့အပြင် Call of Duty: Black Ops Zombies ဂိမ်းကိုတော့ ပုံမှန်ဈေး ၇ ဒေါ်လာကနေ ၂ ဒေါ်လာသာ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အခြားသော နာမည်ကျော်ဂိမ်းတွေကိုလည်း ယခုလိုပဲ ဈေးနှုန်းတွေ လျော့ချပြီး ရောင်းချပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေ ရှိနေလို့ပါပဲ။
ယခုအစီအစဉ်အတွက် ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ တီဗီအစီအစဉ်တွေ အားလုံးအတွက် ပရိုမိုးရှင်းတွေကို ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့ အထိ ရရှိနိုင်ပြီး အခြား apps တွေ Game app , books နှင့် Music တွေအတွက်ကတော့ ဇူလိုင် ၆ ရက်နေ့အထိ ပဲ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit : Myanmar Mobile App